Social Media Marketing ကို သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရွေးချယ်ကြမယ်... - The Khant Digital
Social Media Marketing ဟာ Products တွေနှင့် Services တွေကို Promote လုပ်ဖို့အတွက် Facebook, Instagram တို့လို Social Media Platforms တွေ၊ Websites တွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Academic ပိုင်းမှာ E-marketing, Digital-marketing စသော Terms တွေက ကြီးစိုးပေမယ့် Practitioners တွေနှင့် Researchers တွေကြားမှာတော့ Social Media Marketing က ပိုပြီး ရေပန်းစားနေပါတယ်။ Social Media Marketing ပိုင်းဟာ အမျိုးမျိုးသောအခွင့်အလမ်းများ၊ ရွေး‌ချယ်စရာများနှင့်အတူ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့ Career လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Update ဖြစ်တဲ့ Feature အသစ်တွေ၊ New Platforms တွေရဲ့ Appearance တွေ၊ အဆုံးမရှိ၊ အသစ်အသစ်‌သောလေ့လာစရာတွေကို အမြဲတမ်းလေ့လာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ‌ကြောင့် ဒီ Career အပေါ်ငြီးငွေ့သွားမှာကိုတော့ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ Social Media Marketing ကို Career အဖြစ်မရွေးချယ်ခင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ ထိုအချက်များကို အောက်မှာ Sharing လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့၊ သင့်တော်တဲ့ Career ဖြစ်၊ မဖြစ်ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့၊ စဉ်းစားနိုင်စေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
1. ဘယ်လို Role အမျိုးအစားကို ကို ရှာဖွေရွေးချယ်နေတာလဲ?
Social Media Marketer တစ်‌ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်စဉ်းစားလို့ရနိုင်မဲ့ Role တွေ များစွာရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ Personal Preference, Personality, Skills တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ Role တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အဓိကကျပါတယ်။
a) Business – သင်ဟာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်လိုရင် ထို Company ရဲ့ Social Media Marketing Team မှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့စဥ်းစားနိုင်ပါတယ်။ Business Industries အားလုံးနီးပါးက Social Media ကို အသုံးပြု‌နေရခြင်းကြောင့် B2B (Business To Business) Marketing နှင့် B2C (Business To Customer) Marketing တို့မှ Career အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကို ရှာ‌ဖွေနိုင်ပါတယ်။
b) Agency – အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနား‌သော Brands များရဲ့ Social Media Marketing အတွက် တာ၀န်ယူလုပ်ကိုင်ပေးရန်စိတ်၀င်စားပါက Social Media Agency တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Social Media Experts များနဲ့အတူတကွ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံများစွာလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
c) Freelance – သင့်ရဲ့ Social Media အသုံးပြုနိုင်ခြင်း စွမ်းရည်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီး အလုပ်အ‌ပေါ်ပိုမိုထိန်းချုပ်လိုပါက Freelance လုပ်ခြင်းကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။ Freelance Marketer လုပ်ခြင်းက စိတ်၀င်စားစရာကောင်းသော Careerတစ်ခုဖြစ်၍ ကိုယ်ပိုင် Own Business ဟုလည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ငွေကြေးကိစ္စများကို စီမံခန့်ခွဲရခြင်း၊ကိုယ်တိုင် Marketing လုပ်ရခြင်း၊ Sales တက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ရခြင်း၊ Taxes များကို Filling လုပ်ရခြင်း စသဖြင့် Self-employed လုပ်ရသည်များရှိပါတယ်။
2. Role တစ်ခုမှာ ဘာတွေပါ၀င်သလဲ?
ဆောင်ရွက်ရတဲ့ Tasks တွေဟာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Role နဲ့ သင့်ရဲ့ Experience Level ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ရမဲ့ ကိစ္စရပ်အချို့ကို သိထားသင့်ပါတယ်။
ထိရောက်ပြီး၊ အကျိုးရှိတဲ့ Social Media Marketing Strategies တွေကို သိထားနားလည်ထားရပါမယ်။
Eye-catching Social Media Posts များကိုရေးပေးရပါမယ်။
Social Media Contents များအတွက် images များကို ဖန်တီးရန် Graphic Designers, Photographers များနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ရပါမယ်။
Social Media Accounts များကို Day-to-day Community Management လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
Customers များနဲ့ အကျိုးရှိရှိ၊ ထိရောက်စွာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး‌ပေးရပါမယ်။
Social Media Accounts များရဲ့ Performance များကို Report တင်ရပါမယ်။
Social Media ads (ကြော်ငြာ) များကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးရပါမယ်။
Social Media မှတစ်ဆင့် ပြိုင်ဆိုင်ယှဥ်ပြိုင်မှုများကို Run လုပ်ပေးရပါမယ်။
Marketing Managers များကို Report တင်ပေးရပါမယ်။
Social Media Marketing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Budgets တွေကို သေချာစွာ စနစ်တကျ Manage လုပ်ပေးရပါမယ်။
3. ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Role အတွက် မှန်ကန်တဲ့ Skills များနှင့် Knowledge များ သင့်ဆီမှာရှိပါသလား?
Social Media Marketing လုပ်ဖို့အတွက် မဖြစ်မ‌နေလိုအပ်တဲ့ Skills တွေရှိပါတယ်။ Computer Skills ဟာ Proficient ဖြစ်နေဖို့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် Creative ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Communication Skills နဲ့ Organisational Skills ကလည်း ကောင်းရပါမယ်။ အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါ‌ စေ့စပ်‌သချာမှု၊ တိကျမှန်ကန်မှုရှိခြင်းစွမ်းရည် (Attention to Detail) ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ Continuous Learning (စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာခြင်း) ကိုလုပ်နိုင်သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်။
Brand တစ်ခုရဲ့ Social Media ကို Managing လုပ်ခြင်းက Personal Social Media Profiles များကို Updating လုပ်ခြင်းနဲ့ယှဥ်ရင် ကွာခြားမှုများစွာရှိပါတယ်။ Business Setting မှာ အခြားသော Social Media Marketers များထက် ပိုကောင်းသော Performance များရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့Social Media နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Knowledge, Skills များကို အမြဲတမ်း Develop လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုက Online မှာ ကိုယ်တိုင် သင်ယူလေ့လာလို့ရနိုင်မဲ့ Fantastic Social Media Courses တွေရှိတာ‌ကြောင့် လေ့လာဖို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီ Courses တွေက Brand ရဲ့ Personality နဲ့ Values တစ်နည်းအားဖြင့် Branding and Tone of Voice အကြောင်းတွေ၊ Marketing Mix အကြောင်းတွေ၊ Marketing Activities တွေကို Strategic ကျကျ လုပ်‌ဆောင်နိုင်မဲ့အကြောင်းများကိုနားလည်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Social Media Advertising ကို Run ခြင်း၊ Investments တွေကို ပြန်ရနိုင်‌အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ Social Media Marketing အကြောင်းကို Advanced အဆင့်ထိရောက်အောင် နားလည်ထားခြင်း များကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
4. နောက်ထပ် ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ?
Marketing Industry မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားက နေရာတစ်နေရာရဖို့အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရပါမယ်။ အဲဒီကမှတစ်ဆင့် Social Media Marketer တစ်ယောက်ရဲ့ တာ၀န်တွေ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Experiences တွေ နှင့် Skills အသစ်တွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ Skills အသစ်တွေ နှင့် Knowledge တွေကို အမြဲတမ်း Up-to-date ဖြစ်နေအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Social Media Explorer တို့လို Websites တွေကနေ Social Media Marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့ Articles များ၊ Contents များကို အဆက်မပြတ်ဖတ်ရှုလေ့လာ‌နေပါ။
သင် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Social Media Courses တွေ၊ ရရှိခဲ့တဲ့ Experiences တွေကို သင့်ရဲ့ LinkedIn Profile တွင် ပါ၀င်ရန် အမြဲတမ်း Update လုပ်ပေးပါ။
LinkedIn ပေါ်တွင် Own Blogs များ ၊ Articles များ ရေးခြင်း ၊ သို့မဟုတ် Guest Blogging လုပ်ခြင်းက Social Media ကို အမှန်တကယ်စိတ်၀င်စားမှုရှိကြောင်း၊ Up-to-date ဖြစ်ကြောင်းပြသရာရောက်ပါတယ်။
LinkedIn က သင်စိတ်၀င်စားတဲ့အလုပ်ကိုရှာဖို့ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Freelancer တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ First Clients ကိုရှာဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေက သင့်ရဲ့ New Career Path ကို Connections များစွာနှင့် သိရှိရန်၊ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ Connections တွေမှတစ်ဆင့် သင့်ဆီကိုအလုပ်လာအပ်နိုင်ကြမယ်၊အခြားသူများကို Recommend ပေးနိုင်မယ် ၊သင့်ရဲ့ Career ကိုစတင်ဖို့ အခွင့်အရေးများ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ ဒီ Content သည် Social Media Marketing ကို Career အဖြစ် ရွေးချယ်စဉ်းစားရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်‌စေပြီး သဘောကျနှစ်ခြိုက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။
← Prev: Facebook Marketing ဆိုတာဘာလဲ? Next: Marketing အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ P (၇) လုံး →
Digital Marketing ရဲ့ ကဏ္ဍခွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Social Media Marketing ဟာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ ဒီလို...
Facebook marketing ဆိုတာ Social Media Marketing ထဲကအပိုင်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုပါ။ ယနေ့ခတ် အမျိုးသမီး အမျိုးသား...